Maxaad ka taqaan taariikhda Taliyaha cusub ee Ciidamada Milateriga Soomaaliya.(Akhriso)?? – Shacabka News
Maxaad ka taqaan taariikhda Taliyaha cusub ee Ciidamada Milateriga Soomaaliya.(Akhriso)??
Jeneral Gorod dowladii Carte ee Cabdiqaasim Salaad ayuu ka noqday wasiirka dekadaha. Labo sano ayuuna hayay xilkaasi. Jeneraalka waxuu dhalay sided caruur. Waxuuna degan yahay magaaladda London
Previous Previous post: Yaa gadaal ka riixaya Doorashada Madaxweyne ee la shaaciyay in Cadaado ka dhaceyso ?
Next Next post: AKHRISO: Madaxweynaha Puntland Cabdiwali Cali Gaas Muxuu ka Yiri Maalinta Calanka Somaliya.